Nhau - Iwo mazano ekunyora chip mushure meAVR microcontroller IC kudonhedza
Iwo mafungiro ekunyora chip mushure meAVR microcontroller IC decryption
Nekuda kwekushandisa kwezvishandiso zvakasiyana, nzira dzeIC dzekumisikidza nzira uye zvinodiwa nemagwaro izvo zvakasiyana.
Imwe nzira ndeyekushandisa yakajairika programmer nzira, kana iko kushandiswa kwevazhinji programmers, kazhinji kutsigira BIN kana HEX faira, kurodha zvakananga iyo faira, uyezve inoenderana inoenderana, unogona kupisa zvakananga.
Chechipiri, imwe nzira ndeye kushandisa ISP kana JTAG yekutsvagisa mutsara modhi kunyora iyo faira, nekuti kune akawanda marudzi emitsara yekurodha pasi, mutsetse wekutora wakazara unotsigirwa muAVRSTUDIO kurodha pasi, STUDIO kurodha pasi, iyo faira inodiwa fomati inofanirwa kunge iri HEX Yakaumbwa mafaira , kana rakatakurwa BIN faira, ichaendeswa kwete AVRSTUDIO fomati yekutsigira. Uye inoda maFLASH uye EEPROM mafaera anotorwa pasi zvakasiyana, ndiko kuti, mushure mekunyorwa kwekupa FLASH uye EEPOM mafaira maviri.
AVR microcontroller IC decryption ine akawanda maseti enzvimbo dzefiyuzi inoenderana nekugadziriswa kwechigadzirwa uye nharaunda yekushandisa. Aya mafiyuzi akakosha kwazvo. Vashandisi vanogona kumisikidza uye kumisikidza iyo Fuse kuti iite iyo AVR microcontroller yakasiyana muhunhu kuti ienderane nekushandisa kunoshanda. Asi nekuda kwekuda kwekumisikidza iyo fuse, kune vanotanga kuunza vamwe vasinganyatsonzwisise nzvimbo, mushure mekunyorwa kweiyo microcontroller, chirongwa munguva yekupisa, asiwo pane fuse fomati, kana iyo gadziriso isiriyo, inogona kwete Kushanda kana basa shanduko. Zvese mukutsva kwemavara akanyorwa kana fiyuzi ichifanirwa kugadziridzwa, nekuti maturusi ekutsigira AVR akawandisa, uye maturusi akasiyana eiyo software interface akasiyana, saka ita zvakanakisa muAVR microcontroller decryption usati wajekesa kambani pachayo Ndeapi maturusi zvinoshandiswa, kuitira kuti chip chip decryption kambani zvinoenderana neyayo maturusi ekuita iyo mepu yemepikicha, zviri nyore kudonhedza mushure mechirongwa kupisa, asi ivo vanogona zvakare kushandisa iyo decryption kambani kupa masampuli ekuverenga iyo fuse ficha, uye vamwe Zvishandiso zvinogona kuverenga chip zvakananga, vamwe verenga kumisikidzwa, nezvimwewo, uyezve verenga iyo gadziriso yakachengetedzwa.
Kana ichingova chete fekitori imwe-chip, iyo yakasarudzika ndeye kushandisa yemukati 1MHZ RC oscillation seye system wachi, uye JTAG chiteshi chiri munzira inobvumidzwa. Kune iyo AVR fiyuzi zvirinani kujekesa zvinotevera mapoinzi
1, AVR fuse inogona kuve yakarongedzwa kakati wandei, kwete imwe-nguva OTP fiyuzi.
2, AVR chip encryption lock (LB2 / LB1 = 1 / 0,0 / 0) haigone kuverenga chip kuburikidza neFASH uye EEPROM dhata, asi chimiro cheiyo fuse chinogona kuverenga, asi haigone kugadzirisa Kugadziriswa.
3, iyo fiyuzi zvishoma zvigadziriso inogona kuwanikwa mune yakafanana, ISP uye JTAG serial modhi.
4, dhawunirodha matanho akakodzera ndeaya: mune chip isina kukiya chip kuti utore kodhi inomhanya uye data, gadzira iyo fuse fosi, uye wozogadzirisa iyo nzvimbo yekunyorera chip.
5, chip chipukuta rairo ndeyekuti FLASH uye EEPROM dhata iratidzike, uye panguva imwechete iyo mbiri-bhatiti bhajeti mamiriro akagadziriswa kune isina kukiya nyika (LB2 / LB1 = 1/1), asi chip bvisa rairo haichinje imwe fiyuzi Bit state.
6, uye zvakanyanya kukosha iBOOTRST ikakuruma, ichi chidiki chakamisa hukama pakati pech mushure meesimba-pachirongwa kubva ku0X0000 kana kubva kunzvimbo yeBOOT yakatanga kuita. Sarudzo yeiyo system wachi sosi yakakoshawo zvakanyanya, mushure mekunyorwa kwechirongwa kana mutengi achiwanzo nyore kushandisa, kutamba chikamu cheiyo wachi sosi haina kusetwa nekuda kwezvikonzero, saka system wachi inofanira kunge ichienderana marongero ekutanga.
7, inofanirwa kuve yakajeka kuti iyo SPIEN ikakuruma, vatengi vazhinji vanga vachibvunzana nhare, ndiko kuti, isu tinopa iyo microcontroller haigone kuve yakabatana neIPP, uye vanogona kutenga yavo, fiyuzi yeSpIEN yakagadzirirwa ISP , kana SPIEN iri 1, ISP inobvumidzwa nyika, kana iri 0 yekurambidza nyika, kana ichirambidzwa nyika hongu, haigone ISP port chip.
8, iyo chip yakavharidzirwa uye yakavharwa, kana ikawanikwa fuses uye gadziriso isiriyo, unofanira kushandisa chip chipukuse rairo kujekesa iyo data mune chip, bvisa chivhariso chekuvharira, wobva wadzokororazve kodhi inomhanya uye data, gadzirisa iyo fuses ine chekuita-inoenderana, Uye pakupedzisira gadzirisazve chip's encryption lock zvishoma.
Post nguva: Dec-07-2020